Ellicott Dredges wuxuu Caawiyaa Ku darista 2,300 km ee Waddooyinka Biyaha ee Bangladesh - Ellicott Dredges
Ellicott Dredges wuxuu Caawiyaa Ku darista 2,300 km ee Waddooyinka Biyaha ee Bangladesh
Mashaariicda qodista ayaa ku daray 2,300 kiiloomitir oo biyo mareenno ah nidaamka wabiga Bangladesh dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
In 2012, ka dib markii ay soo cusboonaatay qorshe qodis ah oo ay wadday dowladda Bangladesh, Ellicott bilaabay bixinta wuxuu hoos ugu dhacayaa Maamulka Gaadiidka Biyaha Bangladesh Inland (BIWTA) iyo Guddiga Horumarinta Biyaha ee Bangladesh (BWDB). Tobankii sano ee la soo dhaafay, labadan urur ee dawliga ah waxay iibsadeen 32 qodis, in ka badan kala badhna waa godadka Ellicott. Tan waxaa ka mid ah isku-darka taxanaha 1270 18-inch Dragon®, Taxanaha 1870 20-inch Dragon®, iyo Taxanaha 3870 26-inch Super Dragon ™ dredgers. Markabkii ugu horreeyay ee Ellicott® waxaa la siiyay dowladda Bangladesh, oo loo yaqaan Bariga Pakistan waqtigaas, 1963.
Waxaa loo tixgeliyaa habka ugu qaalisan ee lagu raro xamuulka iyo dadka, marinnada biyuhu waxay muhiim u yihiin Bangladesh, oo ay ku hareereysan tahay wabiga ugu weyn ee webigu ku badan yahay ee adduunka. Ku dhawaad ​​30% ee dalka ayaa fadhiya wax ka yar 2 mitir oo ka sarreeya heerka badda, markii heerka baddu kor u kaco, wasakhdu waxay buuxisaa marinnada biyaha, taasoo keenta inay xirmaan oo ay fatahaan.
Ellicott 20-inch Dragon® dredge sawirka kore
Ugu dambayntii toban (10) unug oo Ellicott ah ayaa Ra'iisul Wasaaruhu daah -furay 6 -dii May Sheekh Hasina. Munaasabaddii caleema -saarka, Ra'iisul Wasaaraha wuxuu daah -furay in ka badan 100 markab oo kuwa badda ah oo ay ku jiraan Ellicott jarista wax -goynta. Unugyada cusub ee Ellicott waxay ku biiraan qodisyo badan oo gaar loo leeyahay oo ka shaqeeya Bangladesh oo dhan.
Munaasabaddu waxay ahayd dabbaaldegga awoodda cusub ee dowladda ee qodidda laakiin sidoo kale waxay ahayd fursad lagu xuso taariikhda dheer ee qodidda Bangladesh. Ra'iisul Wasaaraha aabihiis, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, wuxuu ahaa Ra'iisul -wasaarihii ugu horreeyay ee aasaasay Bangladesh wuxuuna sannadihii 1970 -kii keenay toddoba (7) godod oo Bangladesh ah; oo ay ku jiraan dhowr qodis oo astaan ​​Ellicott® ah. Raiisel wasaare Hasina waxay intaas ku dartay in qodista Bangladesh aysan waligeed tixgelin kuwa awoodda leh intii u dhaxeysay 1975 iyo 1996.
Sababtoo ah dayactir la'aan, dhisme, iyo qashin -qubka dabiiciga ah, marin -biyoodka biyaha ee Bangladesh way adkaan kartaa. Iyada oo la kaashanayo Ellicott Dredges, Bangladesh hadda waxay leedahay 5,900km oo ah marin biyoodyo la heli karo inta lagu jiro xilliga qalalan, halka ay ka ahayd 3,865km kaliya 2005.
Ellicott 2070 Dragon® ayaa ka hawlgala Bangladesh
Fahamka faa'iidooyinka qodista, Raiisel wasaaruhu wuxuu u qoondeeyay raasamaal muhiim ah si loo ilaaliyo xaaladda gaarka ah ee Bangladesh. Waxay iftiimisay in dalku hadda u baahan yahay 500 oo godod oo loogu talaggalay hagista, dib u soo celinta dhulka, iyo xakamaynta fatahaadaha.
Dawladda Qorshaha Delta 2100 sii fogeeya ajandahaan qallafsan oo sugaya mustaqbalka ilaha biyaha oo ujeeddadiisu tahay in la yareeyo saameynta isbeddelka cimilada iyo masiibooyinka dabiiciga ah. La ansixiyay Sebtember ee 2018, waa qorshe muddo dheer ah oo lagu darayo isbedelada iyo faragelinta loo baahan yahay si looga dhigo Bangladesh Delta mid nabdoon, barwaaqo leh, iyo adkeysiga cimilada marka la gaaro 2100.